Amathuluzi Wokuzijabulisa Nokubhema Namahhala Wokuyeka Ukubhema - 802Quits
Ama-Vermonters UKUHLALA UKUYEKA Amathuluzi Okuyeka Ukuzijabulisa
AMAThuluzi WOKUJABULELA UKUYEKA
Amathuluzi Wokuyeka Amahhala Usiza Ama-Vermonters Ahlale Aqinile
Ukugqugquzela kanye namathuluzi amakhulu kuhamba ibanga elide uma usuthathe isinqumo sokuzama ukuyeka ukubhema nolunye ugwayi. Khetha imikhiqizo yakho yamathuluzi WOKUYEKA MAHHALA ohlwini olungezansi (umkhawulo: izinto ezi-2, ngenkathi izimpahla zihlala). Amathuluzi wokuyeka mahhala afika zingakapheli izinsuku eziyi-10 zoku-oda.
Amathuluzi Wokushiya Amahhala atholakala kuphela kubahlali baseVermont.
Ukuphazamiseka kwezandla zakho nengqondo yakho, ukulangazelela kwakho kuzonyamalala ngenkathi uxazulula iphazili.
Ama-Flip-Top Mints nama-Toothpick
Gcina umlomo nezandla zakho kumatasa ngesikhathi sokulangazelela okuneminwe kanye nezikhamo zamazinyo ezilingana kalula ephaketheni lakho noma esikhwameni semali. Amaminintshi awanashukela futhi awana-gluten.
Vumela izandla zakho zenze ukungezwani ngesikhathi sokulangazelela. Gcina leli bhola elijabulisayo nelincane lisizela ukukhululeka kokufuna okudingayo.
Ilungele ifriji, gcina isithombe somuntu othandekayo noma isilwane noma inothi evela enganeni noma ngokwakho ukukugcina uqhubeka njalo lapho ufisa.
Gcina izandla nengqondo yakho kumatasa kuze kube yilapho inkanuko isuka. Ikusiza ukuthi ucebe futhi ulolonge indlela yakho ekusaseni elingenantuthu.
Le pedometer esezingeni eliphakeme izokusiza ukubala izinyathelo osuzithathile kusukela kusikilidi wakho wokugcina.
Thola ukukhululeka kokukhathazeka futhi wehlise ingqondo yakho ngokuhlikihla leli tshe elibushelelezi, elipholishiwe phakathi kweminwe yakho.
I-Peppermint Gum Tin
Hhlafuna ushingamu lapho ukukhanuka kokukhipha i-nicotine kuphazamisa ingqondo nomlomo wakho.
Izinkambu zefomu ezimakwe nge-asterisk (*) ziyadingeka.
Oda Amathuluzi Wamahhala Ukukusiza Uyeke Ukubhema
Angobani la mathuluzi? (mina, ilunga lomndeni, umngani ...) *
Khetha Ithuluzi Lakho Lokuyeka Okokuqala * NoneOkuxhunyaniswa ngamazinyo namaMintsIphazili CubeIsiqeshana se-PedometerUkuphazamiseka PuttyUhlaka MagnetUkucindezela IbholaItshe LokukhathazekaI-Peppermint Gum Tin
Khetha Ithuluzi Lakho Lesibili Lokuyeka * NoneOkuxhunyaniswa ngamazinyo namaMintsIphazili CubeIsiqeshana se-PedometerUkuphazamiseka PuttyUhlaka MagnetUkucindezela IbholaItshe LokukhathazekaI-Peppermint Gum Tin